गाई पुजिन्छ, भैंसी पुजिन्न-गोरु पुजिन्छ, राँगा पुजिन्न-कुकुर पुजिन्छ, बिरालो पुजिन्न-काग पुजिन्छ, कोईली पुजिन्न- किन होला ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७४, आईतवार १८:०६
गाई पुजिन्छ तर भैंसी पुजिन्न । गोरु पुजिन्छ, राँगो पुजिन्न । कुकुर पुजिन्छ, बिरालो पुजिन्न । काग पुजिन्छ तर कोईली पुजिन्न । आफुसँगै गोठमा बाँधिएकी गाई फूलमालामा चिटिक्क सजिएको देख्दा भैंसीलाई लाग्दो हो, ‘स्साला, दूध खाने मेरो, मासु घिच्ने मेरो अनि पुजाचाहिं गाईको मात्र ?’
उत्तिकै काम गर्ने गोरुलाई पुजा गरेको देख्दा राँगालाई लाग्दो हो, ‘म पनि त जोतिन्छु, तर गोरु र ममा यत्रो भेदभाव किन ?’ सुँगा, भँगेरा, ढुकुर, परेवा, लोकल, ब्रोइलर भन्दा हुन्, ‘सेकुवा र छोईला हाम्रो हसुर्ने, तिहारचाहीं त्यो काले कागको मनाउने ?’ आखिर किन ?
पशुहरुका आफ्नै गुनासा होलान् तर सहनशिलताका हिसाबले मान्छेभन्दा पशु धेरै पुजनीय छ । कागले अर्काको नाम काड्दैन, आफ्नो परिचय आफैं दिन्छ । कागभन्दा रिसाउँदैन । भाग् भन्दा भागिहाल्छ । ऊ मानिसजस्तो मीठो–मसिनो मात्र खोज्दैन, हाम्रो खेतबारी बिगार्ने खस्रो र खराब कीरा–फट्यांग्रा पनि खान्छ । यसले दाजुभाइसँग अंशमुद्दा हाल्दैन । डिभोर्स गर्दैन । सम्पत्तिका लागि कुनै तनाव लिंदैन र, दिंदैन ।
गोरुले तलब कम भयो भन्दैन । आन्दोलन, हड्ताल र हलोजाम गर्दैन । गोरुले युनियन बनाउँदैन । भत्ता र कमिसन खोज्दैन । कामलाई सानो–ठूलो मान्दैन । जे–जे काम हो, खुरुखुरु गरिरहन्छ । बठ्याईंमा मान्छे माथि होला तर इमान्दारितामा गोरु जस्तो मान्छे हुँदैन । गोरु श्रमजीविको पनि गुरु हो । कसैका लागि गोरु अन्न फलाउने ढुकुटी हो, कसैका लागि सेकुवा र सुकुटी हो । जे भए पनि गोरुले हामीबाट केही माग्दैन, केवल दिने गर्छ । छोरा–छोरी इन्टरनेटमा अल्झिएका बेला कुकुर मानिसको नजिक आएर बस्छ । मालिक्नि सिरियलमा रमाइरहेका बेला कुकुरले मालिको साथ छोड्दैन । श्रीमान् कम्प्युटरमा झुन्डिएका बेला कुकुर किचनमा आएर श्रीमतीको साथी बन्छ । कुकुरले फेक आईडी बनाउँदैन, लाइक र डिस्लाइकको मतलब गर्दैन ।
कुकुर दिसा आउने बेलामा कराउँछ जसले गर्दा मानिसलाई अलार्मको आवश्यकता पर्दैन । कुकुरले वाइफाइको पासवर्ड ह्याक्दैन । बाह्र घण्टा फेसबुकमा झुण्डिंदैन । वेबसाइटको दुरुपयोग गर्दैन । साइबर बुलिङमा संलग्न हुँदैन । कुकुरका लागि सिसी क्यामेराको जरुरत पर्दैन किनभने कुकुर अक्सर केही चोर्दैन । कुकुरलाई टिभी हेर्नु पर्दैन । कुकुर च्याटिङमा अल्झिंदैन । लोडसेडिङले असर गर्दैन । पकेट खर्च दिइरहनु पर्दैन । कुकुरले जुवातास खेल्दैन । पोर्न फिल्म हेर्दैन । कुकुर इयरफोन टाँसेर निदाउँदैन ।